Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxyadii iyo Weerarkii Caawa lagu qaaday Hotelka SYL iyo Ciidanka Nabad Sugida oo ... - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa Caawa fiidkii weerar qarax gaari laga soo buuxiyay loo adeegsaday iyo mid toos ah lagu qaaday Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho , waxaan qaraxa kadib rag hubeesan ay isku dayeen in ay xoog ku galaan dhismaha Hotelka .
Qarax gaari laga soo buuxiyay ayaa lagu qarxiyay bar laga waardiyeeyo Hoyelka SYL ee magaalada Muqdisho aadna ugu dhaw halka loo yaqaan Beerta Nabad ah oo ah goob inta badan loo dalxiiso ayna dadku ku nastaan, waxaana qaraxa kadib rag hubeesan ay weerar ku qaadeen dhismaha Hotelka.
Ciidamada ilaalada Hotelka iyo ciidamo kale oo dowlada katirsan ayaa la sheegay in ay ku guuleesteen in ay iska caabiyaan qaar kamid ah ragii damacsanaa in ay gudaha u galaan hotelka, waxaana halkaasi laga dilay qaar kamid ah ragii weerarka ku qaaday Dhismaha Hotelka.
Waxaa qadar 40-daqiiqo marka laga joogay qaraxii hore hadana dhacay dhacay qarax kale oo aad u xoogan kaa oo loo maleenayo in uu isna ahaa gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ,qaraxan ayaa sidoo kale ka dhacay goob ku dhaw Hotelka.
In ka badan 14-qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen qaraxyada caawa lagu weeraray Hotelka SYL ee ku dhaw xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad ka badan 30-qof ,qaraxyada ayaa saameyn badan iyo waxyeelo u geesteen Beerta Nabada oo xiligasai ay joogeen shacab badan oo dalxiis u tagay.
Dadka ku dhintay qaraxyadan ayaa qaarkood waxaa ku soo dumay darbiyada dhismayaal ay hoos fadhiyeen, waxaana qaraxyadan qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac uu kasoo gaaray haween jaadka ku iibiya agagaarka Hotelka SYL.
Taliska Nabad Sugida Qaranka ayaa sheegay in ay soo afjateen howlgalkii caawa ka fuliyeen Hotelka SYL ee weerarka lagu qaaday lana dilay ragii weerarka ku qaaday hotelka, Nabad Sugida ayaana sheegtay in hada xaalada ay caadi tahay ayna gacanta ku hayaan amaanka halkii la weeraray.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyadii iyo weerarkii caawa lagu qaaday Hotelka SYL oo ah hotel amaankiisa si weyn loo adkeeyo ayna daganyihiin masuuliyiin katirsan Dowlada iyo dad kale oo ajaaniib ah.